Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Nidaamka Kukunka | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeRayHaber | Warka Duulimaadka Wadada Diyaaradda Highway News and AuctionsSiyaasadda Khaaska ah iyo Siyaasadda Khudaarta
Siyaasadda Khaaska ah iyo Siyaasadda Khudaarta
RayHaber Ku soo dhowow Bogagga,
"Heshiiska Sirta" soo socota: RayHaberwaxay maamushaa bixinta macluumaadka iyo adeegyada la siiyo isticmaaleyaasheena qiimaha badan.
RayHaber Isticmaale kasta oo galaya ama buuxinaya foomamka websaydhka waxaa loo qaadan doonaa inuu akhriyey oo aqbalay qodobbada "Macluumaadka Xuquuqda", "Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah" iyo Shuruucda Adeegsiga ee Soo Noqon ..
RayHaberWaxay isticmaali kartaa macluumaadka laga soo uruuriyey isticmaaleyaasha diiwaangashan iyo kuwa martida ah ee booqda Websaydhka nooc kasta oo ah falanqaynta. RayHaber la wadaag macluumaadkan la-hawlgalayaasha ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, emaylka iyo macluumaadka kale ee shakhsi ahaaneed lama wadaagi doonaan shirkad kasta oo ganacsi, shirkad, hay'ad ama hay'ad kale iyadoon rukhsadda laga helin.
RayHaber e-maylka, magaca, magaca, lambarka taleefanka iyo wixii macluumaad ah ee la geliyo xilliga diiwaangelinta laguma daabici doono Websaydha diiwaangelinta iyo isticmaaleyaasha martida ah;
RayHaber 3 waxay daaha ka qaadi doontaa macluumaadkaaga shakhsiyeed iyada oo la raacayo duruufaha sharci ee soo socda iyo habraaca sharciyeed. wuxuu u furaa xafladaha.
a.) Haddii ay jirto codsi qoraal ah oo ka yimid maamulka sharciga,
b.) RayHaberin la ilaaliyo oo la difaaco xuquuqda hantida
c.) Iyada oo la raacayo shuruucda aad aqbashid shuruudaha isticmaalka.
RayHaberMacluumaadkaaga shakhsiyeed ee ku kaydsan ayaa adiga uun lagu arki karaa. Macluumaadkaan sinaba looma iibin, kirayn ama laguma badalin hay'ad ama hay'ad kale. Marka laga reebo sida lagu sheegay “heshiiskan qarsoodiga”, 3. lala wadaago shaqsiyaadka. RayHaber waxay qaadaysaa dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah si ay u buuxiso shuruudaha lagu ballanqaaday qandaraaskan.
RayHaber macluumaadka lagu keydiyo deegaan aan dadweyn ahayn. RayHaberisticmaalaa dhammaan noocyada heerarka warshadaha si loo ilaaliyo macluumaadka deegaanka.
Waxaad xaq u leedahay inaad cusboonaysiiso oo aad beddesho wixii macluumaad shakhsiyeed ah ee aad geliso muddada diiwaangelinta waqti kasta. RayHaber wuxuu xaq u leeyahay inuu tirtiro ama joojiyo xisaabtaada haddii aad ku guuldareysato inaad u hogaansanto “Heshiiska Sirta” iyo “Heshiiska Adeegga”.
Sababta oo ah nooca internetka, macluumaadka waxaa lagu faafin karaa internetka iyada oo aan lahan tallaabo amni oo kufilan waxaana heli kara oo isticmaali kara dadka aan ruqsadda haysan. Khasaaraha ka dhashay adeegsiga iyo isticmaalkan RayHaberma aha mas'uuliyadda.
Xaaladaha qaarkood, macluumaadka aan shakhsiga ahayn waxaa laga yaabaa in la ururiyo. Tusaale noocan ah macluumaadka waa nooca internetka aad isticmaashay, nidaamka hawlgalka, magaca domain ee goobta aad gaadhay boggayaga adreeska ama cinwaanka.
Macluumaadka waxaa lagu dhejin karaa kombuyutarkaaga markaad booqaneyso bogga. Macluumaadkani wuxuu ku jiri doonaa nooca cookie nooca ama faylka la midka ah waxayna naga caawin doontaa siyaabo dhowr ah. Tusaale ahaan, kariimadu waxay noo oggolaan doonaan inaan abaabulno goobaha iyo xayeysiisyada iyadoo loo eegayo danahaaga iyo doorbidkaaga. Ku dhowaad dhammaan boodhadhka Internetku waxay leeyihiin fursado lagu tirtirayo kariimka laga soo qaaday dariiqa adag, iyaga oo ka hortagaya in la qoro, ama helitaanka fariin digniin ah ka hor inta aan la badbaadin. Fadlan tixraac faylashaada caawinta galkaaga iyo macluumaadka isticmaalka macluumaad dheeraad ah.
Cinwaankaaga IP waxaa loo isticmaalaa in lagu hayo Website-ka iyo xafiisyadayada si joogto ah, si loo maareeyo loona xaliyo dhibaatooyinka. Cinwankaaga IP ayaa loo isticmaalaa si lagu aqoonsado.
Website-kani wuxuu bixiyaa xiriiryo bogag kale. Qarsoodigu wuxuu ku ansaxayaa kaliya boggaan internetka oo ma daboolayo bogag kale. Siyaasadda Khaaska ah iyo Shuruudaha Isticmaalka boggaga la xidhiidha isticmaalka xiriirrada boggan iyo website-yada kale ee loo isticmaalo waa kuwo ansax ah. Waxaa lagu talinayaa in aad akhrido Nidaamka Qarsoodiga iyo Shuruudaha Isticmaalida qoraallada boggaga internetka ee aad adigu la xiriirtid boggan.
Macluumaadka shakhsiga ama shirkadda, cinwaanada e-mailka, tirakoobka iyo martida booqashada ee macaamiisheena isticmaala kaabayaasha aan loola wadaagin dhinac saddexaad.
Diiwaangelinta Goobaha waxaa lagu hayaa qarsoodi marka laga reebo codsiyada laga yaabo in ay sameeyaan kaniisadaha rasmiga ah (Xafiiska Xeer-ilaalinta Guud, Xafiiska Warbaahinta ee Badbaadinta). Diiwaan gelinta waxaa lagu kaydiyaa inta lagu jiro maalmaha 180.
Faallooyinka soo-booqda, macluumaadka xubin-booqdeyaasha, macluumaadka booqashada (IP, timestamp, useragent) waa la xafiday oo ay ku jiraan shaqaalaha Nidaamka Wararka.RayHaber wuxuu xaq u leeyahay inuu beddelo macluumaad kasta oo qoraalkan ku yaal. Adigoo adeegsanaya bartan, waxaa laguu arkaa inaad aqbashay wax kastoo isbeddelo ah oo ku saabsan “Dammaanad-qaansiga Asturnaanta”.
Xuquuqda daabacaadda dhammaan noocyada ay ka midka yihiin code, wararka, sawirrada, wareysiyada RayHaber.com. RayHaberDhamaan qoraalada, alaabada, sawirada, feylasha maqalka, muuqaallada, fiidiyowyada, naqshadaha iyo qabanqaabada goobta .com waxaa ilaaliya sharciga xuquuqda daabacaada 5846. kuwan RayHaber.com lama nuqulan karo, lama qaybin karo, lama baddali karo, looma daabici karo qaab qoraal ah ogolaanshaha qoraalka ah .com. Nuqul ama isticmaalid lama sameyn karo rukhsad la'aan ama asaga oo aan tilmaamin meesha uu ka yimid.
RayHaber waxay ixtiraameysaa asturnaantaada iyo booqdayaashaada iyo waxay balanqaadeysaa inaad raacayso qawaaniinta lagu dejiyay waxyaabaha soo socda.
© Copyright 2019 RayHaber.com dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya.
Wasiir Arslan: "Siyaasadda Gobolka ee Tareenka"
Tareenka wuxuu noqday siyaasadda Gobolka
Kastamonu Castle-Clock Tower Cable Car project gudaheeda